‘कृषि र पर्यटनले घरघरमै स्वरोजगार ल्याउनेछ’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘कृषि र पर्यटनले घरघरमै स्वरोजगार ल्याउनेछ’
‘कृषि र पर्यटनले घरघरमै स्वरोजगार ल्याउनेछ’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता February 28, 2018	0 193 Views
प्रदेशसभा सदस्य पाँच नम्बर प्रदेश
प्रदे श सरकारले विजने स दिन नसक्दा यतिवे ला पाँच नम्बर प्रदे शका सदस् यहरु बे रो जगार जस् तै छन् । फुर्सदको समयमा सम्बन्धित क्षे त्रमै विभिन्न सामाजिक क्षे त्रमा दिन बिताइरहे का सदस् यहरुको गतिविधि, प्रदे श सरकारको काम र विकास निर्माणका विषयमा प्रदे शसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगीसंग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
के गदैर् हुनुहुन्छ हिजो आज ?
प्रदे ससभा सदस् यमा निर्वाचित भइसके पछि सदस् यको शपथग्रहण, मुख्यमन्त्री चयन, सभामुख र उपसभामुख चयन गनेर् काम गरिएको छ । प्रदे श सरकार बने को छ तर पूर्णता पाउन सके को छै न । त्यसमा अनुभवी कर्मचारी पनि आइनसके को ले काम हुन सके को छै न । त्यसै ले हो ला सरकारले हामीलाई कुनै विजने स दिएको छै न । एकप्रकारले प्रदे श सदस् य बे रो जगार जस् तै भएका छौ ं । विजने स नभएपछि अहिले म गृह जिल्लाकै विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुने काम गरिरहे को छु ।
दलीय भागवण्डाले गर्दा प्रदे श सरकारले पूर्णता पाउन नसके को हो ?
हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि मन्त्री हुनका लागि प्रतिस् पर्धा गरिदो रहे छ । तपाइ“ले भने जस् तो लुछाच“ुडी नभए पनि खिचडी पाके का पनि हो लान् । वाम गठबन्धनले त स् पष्टरुपमा मन्त्री हुने संख्या तो के र समझदारीसहितको निदेर् शन गरिसके को छ तर वाम घटकभित्रै पनि मन्त्री हुने को ता“ती ठूलै भएको महसुस हुन्छ । कार्यकर्ता व्यवस् थापनका लागि मन्त्रालयमा थपघट गनेर् बहस पनि सुनिन्छ तर त्यसकै कारणले सरकारले पूर्णता नपाएको भन्ने हो इन ।
तपाइ पनि मन्त्रीकै लाइनमा हुनुहुन्छ हो ?
मे रो स् वभाव चाहि“ जिम्मे वारी नमाग्ने , दिए जुनसुकै जिम्मे वारी पूरा गनेर् व्यक्तिगत स् वभाव छ । तर पनि मन्त्री हुने विषयमा कुरै उठाएको छै न । हो मे रा कतिपय शुभचिन्तकहरुले मुख्यमन्त्रीले समग्र प्रदे श हे र्नुपर्छ । त“ पनि जिम्मे वारीमा रहिस् भने जिल्लालाई थप मद्दत पुथ्यो भन्ने हिसावले मलाई नै सुझाउन आउनुहुन्छ । तर मलाई त्यस् तो मन्त्री मो ह छै न । मलाई के लागे को छ भने पाच नम्बर प्रदे शमा १२ वटा जिल्ला छन् । हामीले नौ वटा मन्त्री बनाउने यो जना छ । एक÷एकवटा मन्त्री जिल्लालाई दिदा पनि तीनवटा जिल्लालाई मन्त्री पुग्दै न । त्यसो ह“ुदा हामीले मुख्यमन्त्री पाइसके पछि मन्त्रीको दौ डमा लाग्नु त्यति व्यावहारिक हदै न ।
उसो भए लविङ गर्नुभएको छै न ?
मै ले भनिहाले ं त्यस् तो कुरा उठाएको पनि छै न । नै तिकताले पनि दिन्छ जस् तो मलाई लाग्दै न । बरु मुख्यमन्त्रीलाई नै राम्रो स“ग सघाउन सकियो भने , उपयुक्त सुझाव दिएर आत्मै दे खि सघाउने हो भने हाम्रो जिल्लालाई त्यसमै धे रै फाइदा छ ।
प्रदे शका थुप्रै कानून बनाउने यहा“हरुको जिम्मे वारी छ, प्राथमिकतामा के छन् ?
सबै भन्दा पहिले त प्रदे शसभा, सरकार सञ्चालन कार्यविधि तथा ऐ न निर्माण गर्नुपनेर् छ । दो स्रो मा स् थानीय सरकार सञ्चालनका कानून निर्माण गर्नुपनेर् छ । यसका अलावा हामीले स् थायी राजधानीको बहस पनि चलाउनुपनेर् छ । किनभने अस् थायी राजधानीमा राजश्व खर्च गर्दा मुलुकलाई फाइदा छै न । स् थायी राजधानी बुटवल हुने कुरामा त्यहाकै भूगो लले साथ दिएको जस् तो मलाई लागे को छै न । स् थायी राजधानी सर्छ तर कहा“ सानेर् भन्ने विषयमा बहस, छलफलबाट तय गरिन्छ ।
पाच नम्बरको आफ्नै विशे षताका कानून निर्माण पनि गर्नुपर्ला के हुनसक्छन् ?
पाच नम्वर प्रदे शको माटो अनुसारको थप कानून बनाउ“दा भूमि व्यवस् थापनका लागि कानून बनाउनु पनेर् छ । हामीसग तराई छ । भित्री मधे श पनि छ । पहाड छ र हिमाल पनि छ । २०२२ सालमा भूमिसुधार लागु भइसके पछि तत्कालीन समयका थुप्रै जग्गासम्वन्धी समस् याहरु छन् । मालपो तमा गएका जग्गा न घरका न घाटका जस् ता भएका छन । भूमिसुधार लागु गर्दा थुप्रै जग्गा लुकाइएको छ । तिनि आकाशे कित्तामा छन् । कतिपय जग्गा काल्पनिक मन्दिर र गुठीका नाममा पनि छन् । तराईतिर अव्यवस् िथत बसो बास व्यापक रुपमा छ । त्यसै ले पा“च नम्वरको आफ्नै विशे षताको भूमि व्यवस् थापन ऐ न निर्माण गर्नुछ । दो स्रो कुरा लुम्बिनी छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति के न्द्रका रुपमा विशे षखालको ऐ न नियमावली बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा झण्डै तीन अर्बभन्दा बढी बुद्धिष्टहरु बस् छन् । तीमध्ये सानो भन्दा सानो अंश मात्रै हाम्रो प्रदे शमा भिœयाउन सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टे वा पुग्छ । त्यस् तै हामी सीमानामा छौ ं । सीमाना व्यवस् थापनका लागि पनि त्यही खालका कानून बनाउन जरुरी छ । अझ पा“च नम्बर त झन धे रै लामो सीमा र विवादित ठाउ“ पनि हामीमै छ । त्यसै ले यस विषयमा सो च्नुपनेर् छ । यसै गरी सांस् कृतिक, सामुदायिक विविधता हामीस“ग छ । यसलाई पर्यटकीय सम्पदाका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यहा“ अवध संस् कृति छ, मगर संस् कृति छ, थारु संस् कृति छ । त्यति मात्रै हो इन आर्य संस् कृति, ने वार संस् कृति छ र अझै पनि सामाजिक प्रक्रियाभित्र आइनसके को राउटे संस् कृति र समुदाय पनि हाम्रे क्षे त्रमा छ । त्यसलाई पनि सम्बो धन गर्न सो ही अनुसारका ऐ न, कानूनको निर्माण जरुरी छ । हामीस“ग भएको सिस् ने हिमाललाई लक्षित गरी उत्तरतिर साहसिक पर्यटक र दक्षिणतिर सांस् कृतिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गनेर् गरी ऐ न नियम बनाउनुपर्छ । अकोर् महत्वपूर्ण कुरा के छ भने दशौ ं, एघारांै शताव्दीमा हिमालदे खि दक्षिणतिरको भे गमा नाथ सम्प्रदायको बो लबाला थियो  । त्यो नाथ सम्प्रदायको के न्द्रबिन्दु घो राहीको चौ घे रा हो  । त्यस् तै महाभारतकालीन रिहार पनि दे उखुरीमा छ । जसलाई कृष्ण बिहार भनिन्छ त्यो पछि रिहार भएको हो भन्ने छ । तसर्थ समृद्ध संस् कृति, मनो हर प्रकृतिको अवधारणालाई हामीले अघि बढाउनुपनेर् छ । यी सबै विषयलाई सम्बो धन गर्नुपनेर् छ ।
दाङको विकास कसरी गनेर् यो जना छ ?
पहिलो कुरा हामीले स् थायी राजधानीको टुंगो लगाउनुपर्छ । प्रारम्भिक चरणका ऐ न कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउ“दै राजधानीको बहसलाई पनि स“गस“गै लै जानुपर्छ । सके सम्म राजधानी बुटवलमा ह“ुदै न मे रो विचारमा । त्यो सर्छ । कता सर्छ भो लिका बहसले निक्यौर् ल गनेर् छ । राजधानी दाङको नजिकै आइरहे को अवस् थामा राजधानीलाई नै के न्द्रबिन्दु बनाएर हामीले दाङको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यो भने को के भने हामीले मध्यमस् तरको एयरपो र्टको निर्माण गर्नुपर्छ दाङमा । त्यस् तै राष्ट्रियस् तरका सभाहलको पनि आवश्यकता पर्छ । त्यस् तै यातायातको पनि त्यही अनुसारको सो च अघि बढाउनुपर्छ । अकोर् कुरा दाङका दुईवटा निकास छन् । एउटा तुलसीपुरबाट अमे लिया र अकोर् घो राही लमही । यो स“गै दक्षिणतर्फ राजमार्गलाई जो ड्ने निकास थप्न जरुरी छ । एउटा त हा“सीपुर हु“दै भालुबाङ निस् िकने , घो राही दे वीस् थान सडकको स् तरो न्नति गनेर् , त्यस् तै बबई गाउ“पालिकाबाट पनि पूर्व–पश्चि राजमार्ग जो ड्ने र तुलसीपुर–सुखेर् तलाई पनि जो ड्ने गरी काम गर्नुपर्छ । कतिपयरुपमा जिल्ला बाहिरको विकासले पनि हाम्रो जिल्लाको विकासलाई फाइदा गर्छ । जस् तो शहीदमार्गलाई मध्यपहाडी लो कमार्गस“ग जो ड्नुपनेर् हुन्छ । त्यो तुलसीपुर, सल्यान, रुकुम ह“ुदै पनि जो डिनुपर्छ र घो राही– हो ले री हु“दै पनि जो डिनुपर्छ । त्यस् तै स् वर्गद्वारीलाई के न्द्रबिन्दु बनाएर पनि यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ । अहिले पनि धे रै पर्यटक त्यहॉ“ पुग्छन् तर यातायातको सुविधा थपियो भने पर्यटकहरुको स् तरबृद्धि हुन्छ र त्यसले दाङलाई पनि फाइदा हुन्छ । अकोर् कुरा संस् कृत विश्वविद्यालय यहा“को महत्वपूर्ण सम्पदाको रुपमा छ । यसलाई सर्वसाधारण जनजीवनस“ग जो ड्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यसलाई पण्डित्याइ“वादको के न्द्रबिन्दु मात्रै बनाउने कि हाम्रा वै दिककालीन मूल्यमान्यताहरु छन, पौ राणिक मूल्य मान्यताहरु छन्, उपनिषदकालीन, परम्परागत मूल्यमान्यताहरु छन्, तिनलाई पुरे तवादीका हिसावले मात्रै हे नेर् कि समयसापे क्षरुपमा परिस् कृत गरे र हाम्रो जीवनशै लीस“ग जो डे र लै जाने यसमा बहसको आवश्यकता छ । वै दिककालीन सम्पदाहरुलाई आजको सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गरे र हाम्रो आफ्नै सांस् कृतिक पहिचान बनाउन विश्वविद्यालयले पनि ने तृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले विश्वविद्यालयलाई र संस् कृत विश्वविद्यालयले हामीलाई सहयो ग गर्नुपर्छ । त्यस् तै हामीस“ग जडीबुटी प्रशस् त छ । त्यो चिजलाई आयुवेर् दिक औ षधि प्रणालीलाई विश्वविद्यालयले परिस् कृत गरे र लै जानुपर्छ । यी दुईवटा काम गर्न सकियो भने संस् कृत विश्वविद्यालयलाई आम सर्वसाधारणको जनजीवनस“ग जो ड्न सकिन्छ । अकोर् कुरा दुईवटासम्म हाइड्यामको निर्माण जरुरी छ । खासगरे र तुलसीपुर र घो राही उपमहानगरपालिकालाई मध्यनजर गरे र दुईवटासम्म हाइड्याम निर्माण गर्न सकियो भने ती ड्यामहरु बहुआयामिक महत्वका हुन्छन् ।
दृश्यावलो कन, माछापालन, पर्यटनका लागि पनि काम लाग्छन् । अनि सिंचाई र पिउने पानीका लागि पनि हुन्छ । यसै गरी हो ले री–विजौ री– स् वर्गद्वारी सडक जो ड्नुपर्छ । त्यस् तै भो जपुर ह“ुदै अमे लिया जो ड्नसके झन राम्रो  । त्यस् तै को इलाबास कुनै बे लाको दे शकै छै ठौ ं नम्वरको भन्सार हो , अहिले शून्य अवस् थामा छ । त्यो नाकालाई मध्यनजर गदैर् लमही–को इलाबास सडकलाई युद्धस् तरमा निर्माण गरिनुपर्छ । मै ले त अझ खङग्रा नाकाबाट रिहार र रिहारबाट नारायणपुर ह“ुदै हो ले री जो डे र स् वर्गद्वारीसम्मको सडक निर्माण गर्न सकियो भने भारतीय पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ । त्यसले अकोर् फाइदा के छ भने खङग्रादे खि तलतिर ठूलो बुद्धिष्ट के न्द्रस“ग छ । त्यो बुद्धिष्ट के न्द्र, महाभारतकालीन रिहार र वै दिककालीन स् वर्गद्वारी गरी तीनवटै पौ राणिक मूल्यमान्यतालाई जो ड्न सकिन्छ । त्यस् तै यादव संस् कृति, थारु संस् कृति र महाभारतमा मगर संस् कृतिलाई पनि जो ड्न सकिन्छ । त्यस् तै दे उखुरीको राप्ती सभ्यता, यता बबई सभ्यता र हापुर खो लाको पनि आप्mनै सभ्यता छ । यहा“को थारु संस् कृति, यादव संस् कृति र मगर संस् कृतिलाई जो डे र सांस् कृतिक पर्यटनको समूह निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले पनि हामीलाई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टे वा पु¥याउ“छ । साहसिक पर्यटकहरु उत्तरतिर पुग्छन् भने बौ द्धिक पर्यटकहरु सांस् कृतिक पर्यटनतिर आकर्षित हुन्छन् । यसलाई पनि पकड्नुपर्छ । हामीले अब प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएन भने औ द्यो गिकीकरण गनेर् कुरा सम्भव छै न । जिल्लामा धे रै उद्यो गहरु छन् । तर उपल्लो तहमा सबै विदे शी नै छन् । दङाली त चौ किदारको रुपमा मात्रै काम गर्छन् । यदि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएन भने हामीले खो ल्ने उद्यो गहरुमा चौ किदारी मात्रै गनेर् भूमिकामा हामी हुन्छौ ं र त्यसले आर्थिक विकास सम्भव हु“दै न । जसले राष्ट्रिय पू“जीको निर्माण ह“ुदै न र संविधानले परिकल्पना गरे को समाजवादउन्मुख हुन सकिदै न ।
घो राही र तुलसीपुर क्षे त्रमा निर्माणाधीन सडक र पुल अलपत्रजस् तै छन् कहिले निर्माण हुन्छन् ?
हामीले चासो व्यक्त गरे का छौ ं । हिजो को भन्दा के ही सकारात्मक काम भइरहे का छन् । यसका लागि पनि ठे क्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । स् िटमे ट वस् तुगत बनाउने र बिलो टे ण्डरलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस् तै ठे क्कालाई पनि टुक्र्याएर बे च्न पाउने व्यवस् था रो क्नुपर्छ । पा“च वर्ष भइसक्यो कटुवाखो लालगायतका पुल निर्माणका काम यी सबै लाई गति दिन सबै को निगरानी जरुरी छ । अबका दिनमा गरिने विकासका लागि सार्वजनिक खरिद ऐ नलाई समयसापे क्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हामी त्यसमा पहल गछौर् ं ।
निर्वाचित भइसके पछि चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
चुनावी घो षणापत्रअनुरुपका यो जनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले के न्द्रमा छलफल भइरहे को छ र हामी प्रदे शमा पनि त्यो छलफल गनेर् छौ ं । कतिपय तत्कालीन कतिपय अल्पकालीन र कतिपय दीर्घकालीन यो जनाहरु छन् । पा“च वर्षभित्र के ही पूरा गछौर् ं के ही दीर्घकालीन यो जनाहरुको शुरुवात गछौर् ं, बाटो लगाउ“छांै  । ठूला कुरा गरे र मात्रै हु“दै न । उत्तरबाट पनि र दक्षिणबाट पनि रे ल ल्याउने कुरा गरे का छांै  । उत्तर र दक्षिणबाट आउने रे लले हामीलाई के ल्याइदिन्छन् र त्यसपछि यहा“बाट फर्किदा के पठाउ“छांै भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो  । आउदा भरिभराउ रे लका डिव्वा आउने तर यताबाट फर्किदा के ही पठाउन सकिएन खाली डिव्वा पठाउने हो भने रे ल ल्याउनुको के औ चित्य छ र ? उताबाट पनि ल्याउने र यताबाट पनि पठाउने यो जनामा हामी लाग्नुपर्छ ।भरी डिव्वा ल्याउने रित्ता डिव्वा पठाउने हो भने हाम्रो व्यापार घाटा कति चुलिएर जाला ?
पाच वर्षमा पाच नम्वर प्रदे श कस् तो बन्छ ?
हाम्रो सो च त के छ भने सके सम्म उत्कृष्ट, समृद्ध प्रदे श बनाउने नै हो भएन भने अन्य प्रदे शस“ग प्रतिस् पर्धा गनेर्  । तुलनात्मकरुपमा एक नम्बर प्रदे शस“ग मात्रै हाम्रो प्रतिस् पर्धा हो ला भन्ने हाम्रो आ“कलन छ । हामीले सबै प्रदे शस“ग प्रतिस् पर्धा र सहकार्य बराबर गछौर् ं । हाम्रो प्रदे श हिमालदे खि तराईसम्म छ । तराईको ठूलो खे तीयो ग्य जमिनलाई प्लटिङबाट जो गाउनुछ । त्यसका लागि भूउपयो ग नीति लागु गर्न जरुरी छ । हामीले कृषि र पर्यटनलाई बढी जो ड दिने छौ ं । कृषिलाई आधुनिकीकरण, वै ज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न सकियो भने त्यसले एकातिर घर–घर र वस् ती–वस् तीमा स् वरो जगार सिर्जना गरे र यो प्रदे शलाई सुखी र समृद्ध बनाउन सक्छौ ं ।
Previous: सवारी दुर्घटनामा नेपालीको मृत्यु
Next: उपभोक्तालाई सुरक्षित पानी नखुवाउनु अपराध